We Fight We Win. -- " More than Media ": ဘယ်သူတွေ မှာ တာဝန်ရှိသလဲ?
ဘယ်သူတွေ မှာ တာဝန်ရှိသလဲ?
"မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မီး နှင့် ရေ ရဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ နေ့စဉ် စစ်ပွဲကြီးတခုလို၊ စစ်ဆင်ရေးကြီးတရပ် လို ဆင်နွဲနေရတယ်"
ဘယ်သူတွေ မှာ တာဝန်ရှိသလဲ? သင့်အတွေး၊ သင်အမြင် ကို ဖော်ပြပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လျှပ်စစ်မီး နှင့် ရေ ရရှိဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ နေ့စဉ် စစ်ပွဲကြီးတပွဲလို ၊စစ်ဆင်ရေးကြီးတရပ်လို ဆင်နွဲနေရပြီး၊ မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ လူ့ဘ၀ အချိန်တွေ ဟာ မီး နှင့် ရေ ရဖို့ အတွက် သာ အချိန်ကုန်နေရတယ်။
နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင် ရေး လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွေ မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု တွေ အကြောင်းများ နဲ့ ပက်သက်၍ ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိသလဲ? စာဖတ်သူတွေရဲ့အတွေး၊ အမြင်များ ကို သိချင်ပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကပ်ဆိုးကြီးကျရောက်ခဲ့သော ထိုင်း နှင့်မြန်မာ နိုင်ငံ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
-နားဂစ်မုန်တိုင်းပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် စူနာမီ အပြီး ထိုင်း နိုင်ငံ ဖူကတ်မြို့ သစ်ကို တွေ့ရစဉ်။
what is happening with your blog?
No activities, same old page for how many days already?
Are you run out of money or what?
မြန်မာအစိုးရကတော့ရေနဲ့မီးရဖို့ ကတော့သိကြားမင်းနဲ့ဘဲဆိုင်တယ်လို့ ယူဆထားဟန်
27 July 2013 at 04:28